महानायक राजेश हमाल र नायिका करिश्मा मानन्धर एकसाथ मुन्द्रेको कमेडी क्लबमा लामो भलाकुसारीपछि देख्नेहरुले भने तपाईहरु किन एक नभएको ? (भिडियो) – Sanjal Nepal
Homeसमाचारमहानायक राजेश हमाल र नायिका करिश्मा मानन्धर एकसाथ मुन्द्रेको कमेडी क्लबमा लामो भलाकुसारीपछि देख्नेहरुले भने तपाईहरु किन एक नभएको ? (भिडियो)
महानायक राजेश हमाल र नायिका करिश्मा मानन्धर एकसाथ मुन्द्रेको कमेडी क्लबमा लामो भलाकुसारीपछि देख्नेहरुले भने तपाईहरु किन एक नभएको ? (भिडियो)
January 5, 2021 admin समाचार 4845
नेपाली सिने जगतका महानायक राजेश हमाल र सदाबहार नायिका करिश्मा मानन्धरलाई फेरी एक पटक एकै साथ रमाईलो गर्दै गरेको अवस्था देखिएको छ । यो देखेर सबै नेपाली दर्शकहरु निकै नै खुशी भएका छन् । दर्शकहरुले राजेश र करिश्माको जोडीलाई आजबाट मात्रै नभई यो जोडी पर्दामा देखिएसंगै मन पराउन थालेका हुन् । यो जोडी नेपाली सिने जगतमा सदाबहार जाडीको रुपमा सबै दर्शकको मन मन्दिरमा बस्न सफल भएको जोडी हो ।
यसपटक वर्षौंपछि राजेश हमाल र करिश्मालाई एकै साथ रमाईलो गर्दै ठट्यौली पारामा प्रस्तुत भएको देखिएको छ । मुन्द्रेको कमेडी क्लबमा दिपा श्री निकालिएपछि नायिका करिश्मा मानन्धर अध्यक्षको कुर्सिमा बस्दै आएकी छिन् । सोही कार्यक्रममा अथितिको रुपमा महानायक राजेश हमाल पुगेका थिए । उनले कार्यक्रमको शोभा नै बढाएका थिए । सोही कार्यक्रममा राजेश हमाल र करिश्मा मानन्धरले काजी र बसन्तीको भूमिकामा ठट्यौली पारामा रमाईलो गर्दै अभिनय गरेका थिए ।
यी दुई सदाबहार जोडीले गरेको उक्त अभिनयलाई दर्शले निकै नै मन पराएका पनि थिए । अभिनयकालागी मुन्द्रेले डाइलग क्रिएट गरेका थिए । जस्मा काजीले बसन्तीलाई मुन्द्रेको जिम्ममा लगाएर आफु जानु पर्ने सिन थियो भने बसन्तीले पनि काजीलाइृ मुन्द्रको जिम्मा लगाएर नजान आग्रह गर्नु पर्ने सिन थियो । तर काजी कुनै पनि हालतमा जानै पर्ने भएको हुनाले मुन्द्रेलाई बसन्तीको राम्रोसंग रेखदेख गर्न आग्रह गरिएको थियो । मुन्द्रेको रेखदेखमा बस्नु पर्दा बसन्तीलाई काजीको धेरै नै याद आउने र चाँडै फर्कने बाचाका साथ काजीलाई बिदाई गर्नु पर्ने सिन थियो ।
सोही सिन र डाईलगमा करिश्मा र राजेशले निकै ठट्यौली पारामा हाँस्दै र हँसाउँदै अभिनय गरेका थिए । मुन्द्रेले पनि बसन्तीको राम्रोसंग रेखदेख गर्ने बचन काजीलाई दिएका थिए । यो सिन हेरेर मुन्द्रेको कमेडी क्लबमा हाँसोको फोहोरा नै छुटेको थियो । करिश्मा र राजेशको यो ठट्यौली पारामा गरिएको रमाईलोलाई सोशल मिडियामा धेरै दर्शकहरुले वर्षौंपछि यो जोडीलाई देख्न पाएकोमा खुशी पनि व्यक्त गरेका छन् । भिडियो:
November 2, 2020 admin समाचार 6467
सात दिनभित्रमा तपाइले सोचेको काम बन्नेछ बिल्कुलै बेवा स्ता नगर्नुहोला, ॐ लेखि सेयर गरौं!!! ॐ मात्र उच्चारण गर्नु भयो भने पुरा ब्रमाण्ड्को देबि देबताको शक्ति हुन्छ। त्यसैले देखेको 30 सेकेण्ड भित्रमा शेयर गर्नुहोस । ७
सपनाको लागी जापानबाट रातारात आयो बहुमुल्य उपहार,सपनालाई पहिलोपटक मिल्यो यत्तीधेरै खुशी भिडियो हेर्नुहोस !
December 7, 2020 admin समाचार 1831
भक्तपुर : भक्तपुर–काठमाडौं ६ लेन सडकअन्तर्गत मध्यपुर थिमि नगरपालिका ३ कौशलटारमा आइतबार बिहानै भएको सडक दुर्घटनामा परी छोरीको मृत्युविरुद्ध आमाले किटानी जाहेरी दिएकी छन्। उक्त दुर्घटनामा एक महिलाको मृत्यु हुँदा अरु तीन पुरुष घाइते भएका
November 9, 2020 admin समाचार 4393
LEX 18 agenda conversation: Job club (541143)
सञ्जेललाई कुटपिट गर्ने कर्मचारी बर्खास्त, अभद्र व्यवहार मुद्दामा म्याद थप (511668)
Hello world! (433329)
A above Googler and career teach says you shouldn’t at all times flip your ardour intoaabounding-time job (395886)
dole traces grow as seasonal jobs dry up (131046)
पाथिभरा माताले सबैको कल्याण गरुँन ! – हेर्नुहोस् बैशाख २० गते सोमबारको राशिफल (104050)
Brody king On Why He Wouldn’t depart His full Time Job To signal With WWE (101498)